Lalisaa Deessisaa Badhaasa Bostonitti Kennaniif Deebisee Kenne,Asallaan Shaampiyoonaa Itiyoophiyaa Qopheessuutti Jirti
Waxabajjii 24, 2013
WASHINGTON,DC — Atileetiin Itoophiyaa beekamaan Lalisaa Deessisaa ka Ebala dabre keessaa maratoonii Boston bombiin irratti nama fixan kaan moohate badhaasa achitti kennaniif kaan umata biyya suniitiin galateeffachuuf warra gaasa nami iirraa miidhameef jajjabeessaaf jedhee deebisee kenne.
“Ummatii naanno osunii bahee waan nu simateef isaaniin galateeffachuuf kenne.”
Lalisaan gaafa minsiterii haajaa alaa Amerikaa Johan Kery kora Wadlaa Afrikaa dhiyoo tana Itoophiyaatti taaheef imaltu dhaqee sun badhaasa kana Amerikaatti deebisuuf waadaa gale.Ispoortiin lafa bahanii itti gammadan tahuu maltellee jedha Lalisaan.
Gama kaaniin ammoo Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa roobii dhuftu, iftaan jechuu Arsi Asallaatti jalqabdi. Atileetota naannoo Itoophiyaatti cufaatti walti dhufaa.Akka itti gaafatamoota atiletiksii Oromiyaa keessaa obbo Naggaa Tujubaa jedhetti Oromiyaan gara atileeota 80 caalaniin dorgomtii kaayoon dorgommii tanaalleen atileetoa biyya bakka bu’an keessaa filachuuf.Kilbaii 30 caalaa fi naannolee sagalii fi bulchiinsa magaalaatti irratti dorgoma.
Gama kaaniin Konfidireeshiiniin Kubbaa Miilaa dhumachaa deemuutti jiraa,Biraazil,Ispeen,Xaliyaanaa fi Uragaayitti walti hafee walti qophaahuutti jira.
Biyya akka malee moohan keessaa,Spain Tahiti 10-0,Uraagaayilleen Tahiti 8-0 fi Naayjeeriyaan biyya tana 6-1 dhaantee baaftee waluamttuu biyya takkuma dorgommii akkanaa seentee hin beenne tana gooli i24 itti fahanii isiilleen tokkoo galfattee galfatte.